Ardayda Somaliland ee wax ka barata wadanka malaysia oo dooratay Gudoomiye cusub. | Somaliland.Org
Ardayda Somaliland ee wax ka barata wadanka malaysia oo dooratay Gudoomiye cusub.
April 26, 2009	Ardayda Somaliland ee wax ka barata wadanka malaysia oo dooratay Gudoomiye cusub.
Kuala lumpur (somaliland.org) Wadanka malaysia oo ah wadan aad uga horumaray dhinaca waxbarashada sare (higewsh education) ayaa waxa wax ka dhigta arday farabadan oo ka kala timi wadamada somalida, gaar ahaan wadanka Somaliland kuwaas oo kala dhigta jaamacadaha kala duwana ee malaysia.
Waxa kunool wadanka malaysia arday aad u tiro badan oo somalilader ah kuwaas oo kala dhigta jaamacada iyo College yada kala duwan ee wadankaas. Ardayda Somaliland waxay leyihiin urur ay sanadkiiba mar doortaan kaas oo xidhiidhiya dhamaan aradayda ku kala filiqsan daafaha malaysia. Iyagoo doorta gudoomiye, G/kuxigeen iyo shan xubnood oo gudi ah. Sharciga ururka ardaydu wuxu dhigayaa in ay doorashada soo qaban qaabiyaan Gudoomiyaha iyo gudiga xilka haya ee wakhtiguna ka dhamadaay, halkaas oo ay jamacad weliba soo dirsato arday ay soo wakiilatay, madaama u wadanka malaysia yahay wadan aad u kala fog ardayduna aanay ka baxayn taraaga dheer.
25/04/2009 shir ay isugu yimaadeen magalada Kuala-lumpur ee caasimada malaysia arday ka kala socotay dhamaan jamacadaha iyo college yada wadanka malaysia asal ahaana u dhashay Somaliland ayaa waxay ku doorteen gudoomiye, G/kuxigeen iyo shan xuboon oo gudi ah, kuwaas oo xilkii kala wareegay gudoomiyihii hore iyo xubiniihisa.
Gudoomiyanimo waxa isku soo sharaxay sadex nin oo kala ah mubarak abdulah hure, abdirisaaq ibrahim iyo huseen xarbi. Huseen xarbi waxa uu codaynta ka hor cadeeyay in uu ka tanasulay musharax nimadiisii una tanaasulay mubarak abdulahi. Sidaas ayaanay codayntii ku bilaabantay waxaanay u dhacday sidatan. cabdirisaaq waxa uu hellay 34 cod halka mubarak na ka helay 64 cod, sidaasna ay guushu ku raacday md. Mubarak abdilahi hure.
Gudoomiyaha xilka wareejiyay Md. Ahmed shadaf ismaciil oo ah gudoomiyihii ugu xiliga dheera, isagoo xilka hayay mudo sanad iyo badh ah, aya hadal uu ka jeediyay xaflada xil wareejinta ku sheegay sababta uu wakhtiga dheeraadkaa u hayay xilka ardaydu u dhiibatay. Hadaladiisana waxa ka mid ahaa.
Waxa laydoortay 2007 waxaanay ahayd inaan xilka wareejiyo 2008 balse khaladaad dhacay awgood ayaa kaliftay inaan maanta wareejiyo, kuwaas oo ah in halkii ururku uu qaban qaabin lahaa shirka ardayda aanay dhicin ee qaar ka mid ah ardaydu shir qabteen kuna doorteen gudoomiye aan loo dhamayn. Dhamaan ardayduna diiday, taasaana kaliftay inaanu manta shirkan qabano xilkana aanu ku wareejino cidii aradaydu doorato.
Gudoomiyaha xilka wareejiyay isagoo kaftan iyo dardaaran isticmaalaya waxa uu yidhi “Gudoomiyaha cusub waxa looga bahan yahay inuu dhamaan ardayda Somaliland ee ku dhaqan daafaha malaysia uu noqdo mid ka war haya iskuna xidha, waxana loo bahan yahay gudoomiyaha cusubi inuu noqdo mid aan lagu arag 10am suuqa.
Intaa ka dib waxa isna hadal kooban ka jeediyay goobtaas gudoomiyaha cusub, Md. Mubarak abdulahi hure waxana uu yidhi
Dhamaan ardayda ii codaysay iyo kuwaan ii codaynba aad bay u mahadsanyihiin kasoo qayb galka ay ka soo qayb galeen xafladan, qiimaha wayn inoogu fadhida. Waxanan diyaar u ahay inaan dhamaan ardayda Somaliland ee malaysia tuulo ama magaalo ha joogee meel kasta oo uu joogo innuu ururkani noqdo mid ka war haya madaama aynu qurbo ku noolnahay wax yaabo fara badana aynu kala kulmi karno. Ururkanina waxa uu noqondoona mid ay ku jiraan dhamaan ardayda ka timi J. Somaliland iyadoo ururadii hore aanay ku jirin Somalilander’s ka ka yimi wadamada carabta iyo haweenka wax ka barta malaysia taasina ay khalad ahayd madama waxaynu meesha ku joognaa ay tahay Somaliland nimo waa inaynu meel iskaga wada war haynaa.
Waxaanu xubnaha cusub ku daray haween, wana markii u horaysay ee ururka ardayda Somaliland ay qayb ka noqdaan hablaha Somalilander ka ah ee malaysia.
Gudoomiyaha iyo xubnaha cusub.
1. Mubarak abdilahi hure (Gudoomiye)
2. Iibrahim abdullahi (G/kuxigeen) 3. Muuna bile hirsi (xubin)
4. Xaliimo cabdi Axmed (xubin)
5. Khalid cabdiqadir salax (xubin)
6. Mohamed ibrahim yusuf (xubin)
7. Khadar moxamud gahayr (xubin)